Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. ‘आइसोलेसन बनाउन सक्दैनौ, संक्रमितलाई प्रदेश सरकारले लैजाओस्’ – Emountain TV
‘आइसोलेसन बनाउन सक्दैनौ, संक्रमितलाई प्रदेश सरकारले लैजाओस्’
परासी, ११ जेठ । आइसोलेसन नहुँदा पश्चिम नवलपरासीका दुई संक्रमित २ दिनदेखि क्वारेन्टाइनमै बस्न बाध्य छन् । स्थानीय तह र प्रदेश सरकार कसैले पनि उनीहरुलाई आइसोलेसनमा पठाउन वास्ता गरेको छैन । उनीहरु संक्रमितले पाउने उपचार सेवाबाट समेत वञ्चित छन् । संक्रमित भएको जानकारी पाएका उनीहरुलाई थप उपचारका लागि आइसोलेसनमा नपठाउँदा मानसिक रुपमा त्रसित हुन थालेका छन् ।
नगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले आफूहरुले बनाउन नसक्ने जनाएपछि संक्रमित बिचिल्लीमा परेका हुन् ।
शुक्रबार बिहान जिल्लामा थप ३ जना संक्रमित देखिएका थिए । तिमध्ये रामग्राम नगरपालिकामा देखिएका दुई संक्रमितलाई परासीस्थित आदर्श माविको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । सुस्ता गाउँपालिकामा देखिएका संक्रमितलाई भने गाउँपालिकाले भीम अस्पताल भैरहवाको आइसोलेसनमा पठाएको छ ।
संक्रमितलाई राखिएपछि शुक्रबार राति क्वारेन्टाइनमा राखिएका अन्यले संक्रमण फैलिने भन्दै अन्यन्त्र लैजानु पर्ने माग राखेर नाराबाजी गरेका थिए । क्वारेन्टाइनमा संक्रमितसहित ३२ जना छन् ।
तराईका जिल्लामा २ सय पहाडमा ५० बेडको आइसोलेसन बनाउने प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको छ । सरकारले नीतिगत निर्णय गरेकाले आफूहरुले आइसोलेसन बनाउन नसकिने रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताए । संक्रमितलाई अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुःखद भएको भन्दै संक्रमितको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने नगरप्रमुख गुप्ताको भनाई छ ।
जिल्लामा संक्रमितको संख्या ५ पुगेको छ । जिल्लामा आइसोलेसन नभएकाले अन्य तीन जनालाई भीम अस्पताल भैरहवामा पठाइएको छ । उनीहरु सबै भारतबाट आएका हुन् ।
शनिबार बिहानसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या ८ सय ३८ रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गौरव ढकालले जानकारी दिए । जिल्लामा अहिले पनि भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दो छ ।